Izinhlamvu Ze-Emojis ▷➡️ eltecnoanalista
2 Kufundwa iMin
😀 😃 😄 😁 😆 😂 🤣 😇 😊 🙂 ☺ 😋 😌 🥰 😘😗 🤫 🤭 🤥 😳 😠 😡 🤬 😕 🙁 😬 😣 😣 😖😫 🥱 😤😮💨 🥵 🥶 😶 🌫️ 😴 💤 😈 👹 💩 👻 ☠ ☠ 👽 🎃🎃 😹😻 🖐 ☝ 🖖 👋 🤙 💪 🦾 ✍ 💅 🦵 🦿 🦶 🦷 👅👅 🦻👁 🧑🦰 👨🦰 👱♀️ 👱 👱♂️ 👩🦳 🧑🦳 👩🦲 🧑🦲 🧔♀️ 🧔♂️ 👵 🧓 👴👲 👳♀️ 👳 👼 👸 🤴 👰 👰♀️ 👰♂️ 🤵♀️ 🤵♂️ 🙇 🙇♂️ 💁 🙅♀️ 🙅♀️ 🙅 🙅♂️🙆 🙆 🙆♂️ ♂️ 🙋 ♀️ 🙋 🙋♂️ 🤦♀️ 🤦 🧏♀️ 🧏 🙎♀️ 🙎♂️ 🙍♀️ 🙍 🙍♂️ 💇♀️💇 💇♂️ 💇♂️ ♂️ 🤰 🤱 👩🍼 🧑🍼 👨🍼 🧎♀️ 🧎♂️ 🧍♀️ 🧍♂️ 🚶 🚶♂️ 👩🦯 🧑🦯👨🦯 🏃♀️ 🏃 🦼 🧑 🦼 👨🦼 👨🦼 🧑🦽 👨🦽 💃 🕺 👭 👬 🧑🤝🧑 👩🧑🤝🧑👩 👩👩👩 💑 👨👨👨️💋👨 👩‍❤️ 💋‍👩 💏 👨‍❤️‍💋‍👨 ❤ 🧡 💛 💚 💙 💜 🤎 🖤 🤍 💔 💔 💔 ❣
🐶 🐱 🐭 🐹 🐰 🐻 🧸 🐨 🐯 🦁 🐮 🐷 🐸 🐵 🙈🙉 🐜 🦗 🪳 🕷 🕸 🦟 🪰 🪱 🐢 🐍 🐙 🦑 🦞 🦐 🦪🐠 🐎 🐖 🦇 🐓 🦅 🦆 🦢 🦩 🦚 🦤 🐕 🐕 🦮🐕🦺 🐈 🐈⬛🐇 🌾 🌺 🌻 🌹 🥀 🌼 🌸 💐 🌰 🐚 🌍 🌏 🌕 🌗 🌘🌑 ⛄ 🌬 💥 ❄ 🌨 ☃ ⛄ 🌬 💥 ❄ 🌨 ☃ ⛄ 🌬 💥 ❄ 🌫 🌈 ☔ 💧 💧 💧
🍏 🍎 🍐 🍊 🍋 🍉 🍇 🍓 🍒 🫐 🥭 🍍 🥥 🍅 🥑🫒 🍗 🍖 🥩 🍤 🥓 🍟 🌭 🍕 🥪 🌮 🫔 🥙 🧆 🥘 🍲🫕 🍵 🫖 🍪 🥠 🥮 ☕ 🍵 🫖 🥤 🧋 🧃 🧉 🥛 🍺 🍻 🍷 🥂 🥂 🥂 🍅
⚽ 🏀 🏈 ⚾ 🥎 🎾 🏐 🎱 🥏 🏓 🏓 🥅 🏒 🏏 🥍 🥌⛳ ♂️ ⛹️♀️ ⛹ ⛹️♂️ 🤾♀️ 🤾 🤾♂️ 🧗 🧗♂️ 🏌 🧘♀️ 🧘 🧘♂️ 🧖♀️🧖 🧖♂️ 🏄♀️ ♂️ 🏊♀️ 🏊 🏊♂️ 🤽♀️ 🤽 🤽♂️ 🚣 🏇 🚴♀️ 🚴 🚵♀️🚵♀️ 🚵♂️ 🎽🎽 🏅🥇 ♀️ 🤹 🤹♂️ 🎭 🎨 🎬 🎤 🎧 🎹 🪗 🪘 🎺 🎸 🎻🪕 🎻🧩 👷 👷♂️ 👩🏭 🧑🏭 👨🏭 👩🔧 🧑🔧 👩🌾 👨🌾 👩🍳 👨🍳 👩🎤 🧑🎤 🎨 🧑🎨 👨🎨 👩🏫 🧑🏫 👨🏫 👩🎓 👨🎓 🧑💼 👩💻 👩💻 🧑💻 👩🔬 👨🔬 👩🚀 🧑🚀 👨🚀 👩⚕️ 🧑⚕️ 👨⚕️ 🧑⚖️ 👩✈️ 🧑✈️ 💂♀️ 💂 💂♂️ 🕵 🕵️♂️ 🤶 🧑🎄 🎅 🕴️♀️ 🕴 🦸♀️ 🦸 🦹♀️ 🦹♂️ 🧙♀️ 🧙 🧙♂️ 🧝♀️🧝 🧝♂️ 🧝♂️ ♂️ 🧞♀️ 🧞 🧞♂️ 🧜♀️ 🧜♂️ 🧜♂️ 🧛 🧟♀️ 🧟 👯♀️ 👯 👯♂️ 👪 👨👩👧 👩‍👦‍👦 👨‍👩‍👧‍👧 👩‍👩‍👦 👩‍👩‍👧 👨‍👩‍👧‍👨‍👨‍👨‍👨 👨👧 👨👨👧👦 👨👨👦👦 👨👨👧👧 👩👦 👩👧 👩👧👦 👩👧👧 👨 👧 👨‍👧‍👦 👨‍👦‍👦 👨‍👧‍👧
🚗 🚙 🚕 🛺 🚌 🏎 🚓 🚑 🚐 🛻 🚛 🚜 🏍 🚲 🦼🦽 🛩 ✈ 🛫 🛬 🛰 🛸 🛶 ⛵ 🚤 ⛴ 🚢 ⚓ ⛽ 🚏 🚦🚥 🌌 🌠 🌆 🏙 🌃 🌉 🌌 🌠 🏘 🏰 🏟 🏠 🏡 🏢🏚 🏢🏣
⌚ 📱 📲 💻 ⌨ 🖨 🖱 🖲 🗜 💽 💿 📀 📼 📸 📹🎥 💴 💶 💷 💰 🪙 🧾 💎 ⚖ 🧰 🔧 🔨 ⚒ 🛠 🪓 🪚🔩 💈 🧲 ⚗ 🧪 🧫 🕳 💊 💉 🩹 🩺 🏷 🔖 🚽 🚿 🛁🛀 🧧 🎁 🎊 🎉 🎏 🎀 🧧 🎁 🪆 🎎 🏮 🪔 ✉ 📨 📧💌 🪧 📓 📕 📗 📘 📔 📒 📚 📗 📘 📔 📒 🔗 🖇 ✂📐 🥻 🩱 👙 🩲 🩳 💄 💋 🧦 👠 👡 👢 🧦 🧦 🩴🩴
☮ ✝ ☪ 🕉 ☸ 🔯 🕎 ☯ 🛐 ⛎ ♉ ♊ ♋ ♍ ♎♏ 🈵 🈹 🈲 🅰 🆑 🆘 ⛔ 📛 ❌ ⭕ 💢 ♨ 🚯🚳 🚳🚳 🚾 ♿ 🌐 ♾ ⓜ 🏧 🚾 ♿ 🛂 🛄 🛄 🚰 🛗🚹 🚺🚺 ⏭ ⏮ ⏩ ⏪ 🔀 🔂 ⏭ ⏩ ⏪ 🔂 ⏭ ⏮ 🔽 ⏫ ⏬⏬ ➗ ✖ 💲💲 © ® ™ 🔚 🔛🔙 🔝🔜 🔜🔜 🔘☑ 🟠🟡 📣 📢 🔔 🔕 🃏🃏 ♠ ♣ ♥ ♥ ♥ 🗨 🗨 💭 💬 💬 🕐 🕒 🕓🕒 🕕🕖
izinhlamvu ze-emoji. Uma ufuna ukudlulisa a imizwa kumlayezo nge-smartphone noma ezingxoxweni ezingokoqobo ezinkundleni zokuxhumana, kungenzeka ukuthi usuyisebenzisile kakade inhliziyo yakho, isandla sokushaphu, izintende, noma ubuso obuphuzi obujabulisayo. Ukusesha kwe-Google kwakamuva kuthole ukuthi igama elithayiphiwe kakhulu ku-SMS noma ingxoxo bekungelona igama, kodwa idizayini yenhliziyo ebomvu. Ngokusho kwenkampani, isithombe nokuguqulwa kwaso kuvela izikhathi eziyizigidigidi ngosuku emhlabeni jikelele. Ukudla, izilwane, ezokuthutha, abantu, imizwa. Zonke lezi zithombe ezimibalabala ezivela njengenketho kukhibhodi yakho zibizwa I-Emojis.
Izinhlamvu ze-Emoji ➡️
Ukuxhumana akukhona nje ngamagama akhulunywayo noma abhaliwe, ngoba sibuye sixhumane ngaphandle kokukhuluma, okungukuthi, ngaphandle kokusebenzisa ulimi. Ngokuqondile, ngesimo sobuso bethu, ukuthinta kwethu, ulimi lwethu lomzimba kanye nephimbo. Ukuxhumana kwethu kuya ngokuya kudijithali. Sibhala ama-imeyili futhi sixoxe WhatsApp, Facebook, Instagram noma Snapchat. Esingakwazi ukukuveza empilweni yangempela ngamagama, noma ngokungakhulumi, kushintshaniswa ama-Emoji nemibhalo emifushane. Lokhu kwengeza imizwa embhalweni futhi kungagwema ukungaqondi kahle. Abantu abaningi bathi bangakwazi veza imizwa kangcono nge-Emojis kunamagama.
Ngokungeziwe ezenzweni zobuso ezihlukene nokuthinta komzimba, kukhona nama-Emoji amele izinto. Lokhu ngokuvamile kusiza omunye ukuba aqonde isimo kanye nomongo waso. Ukuziphendukela kwemvelo kwe izinhlamvu ze-emoji Lethe izinzuzo eziningi kumabhrendi kanye nezinkundla zokuxhumana. Enye yezinkulu izinzuzo zokusebenzisa Izithonjana kanye ne-Emoji ukufinyeza umlayezo, okungukuthi, ukwenza okuqukethwe yi-a umbhalo uyashesha futhi uqonde kakhudlwana.
Singasho ukuthi cishe akunakwenzeka ukuthumela futhi ungayifaki i-Emoji, akunjalo? Uma ungomunye walabo abathandayo izinhlamvu ze-emoji, kodwa awazi ukuthi zisetshenziswa kanjani ngobuchule, sizokusiza! Ibonisa ukuthi le mifanekiso eyingcaca yaba khona kanjani nokuthi iyiphi indlela engcono kakhulu yokuyisebenzisa ezincwadini zakho.
Izinhlamvu ze-Emojis Ziyini?
Igama "I-Emoji »Ivela enhlanganweni ye« e »(絵), okusho isithombe ngesi-Japanese kanye « ne-moji »(文字), okusho uhlamvu. Okusho ukuthi, ziyizimpawu ezimele umqondo, igama noma ibinzana eliphelele.
Lezi zimpawu zinokubukeka kwezinkulumo, izinto, izilwane, izinhlobo zesimo sezulu, njll. Zaba umkhuba ngokusetshenziswa okwandayo kwama-smartphone.
Namuhla ziyingxenye yokubhala futhi zibhekwa njengolimi olusha. Ukwenza isibonelo, igama lonyaka izinkulungwane ezimbili neshumi nanhlanu, elikhethwe yisichazamazwi se-Oxford, lalithi !
Kodwa ukunakekelwa! Ungaphambanisi izinhlamvu ze-emoji con Izithombe-mzwelo / Izithonjana. Nakuba ama-Emoji eyizinhlamvu ezizimele, izithonjana ziyizithombe-mzwelo noma izimpawu ezenziwe ngezinhlamvu zekhibhodi, ezifana nokuthi (-: noma <3.
Umlando "wezinhlamvu ze-Emoji"
I-Los izinhlamvu ze-emoji Sebevele beyingxenye yesiko lethu futhi nsuku zonke kunzima ukukhumbula ukuthi beza nini futhi kuphi, akunjalo?
Kodwa indaba indala kakhulu kunalokho kubonakala futhi iqala ngo-XNUMX, eJapane, njengoba umsuka wegama elithi "Emoji" usuvele ufunwa.
Konke kwaqala lapho inkampani yomakhalekhukhwini i-NTT DoCoMo ithuthukisa i-I-mode, uhlobo lwephakheji yolwazi lwamaselula, okuhlanganisa iposi, isimo sezulu, izindaba kanye nokufinyelela ku-inthanethi, okwakuthuthuke kakhulu ngaleso sikhathi futhi kuhloswe ngayo ukuguqula indlela amaJapane axhumana ngayo. .
U-Shigetaka Kurita, omunye wabasebenzi be-NTT DoCoMo ababambe iqhaza kuphrojekthi ye-I-mode, wabona ukuthi ukuxhumana kwakubanda futhi ngezinye izikhathi kwakungaqondakali ngokukhawulela kuphela imisho ebhaliwe kumakhalekhukhwini, futhi waqala ukufuna indlela. .
Kodwa akekho kubo owanelisekile futhi kungaleso sikhathi lapho u-Kurita, owayengeyena umklami, eqoqa iqembu elincane futhi, ngomkhawulo wamaphikseli ayishumi nambili × ayishumi nambili, wasungula ama-Emojis ayikhulu namashumi ayisikhombisa nesithupha anomlando.
Ngokusho kukaKurita, ugqozi lwakhe lwalezi zimpawu zakuqala luvela emasikweni aseJapane kanye nezinkulumo azibona ku-anime ne-manga esemncane.
Lapho umlobi we-Emojis ekugcineni ethula imiklamo yasekuqaleni ezinkampanini ezinkulu zobuchwepheshe, wayelindele ukuthi zizoyithuthukisa ngesakhiwo sazo, kodwa lokho akwenzekanga: izimpawu zingene kwimodi mina ngokuqondile ngendlela ezaziklanywe ngayo ekuqaleni.
Kungekudala ngemuva kokukhishwa kwe-Emojis emphakathini uwonke, ezinye izinkampani zezokuxhumana zaqala ukukopisha ngokungenamahloni imiklamo nombono wabalingiswa, zengeza izinto ezintsha, kuyilapho inkampani i-NTT DoCoMo kanye ne-Kurita bengazange bagunyaze ukusungulwa.
Lokhu kugcine sekukhiqize izinhlamvu eziningi ezahlukene kanye nesiyaluyalu sangempela: inani lama-Emojis lifinyelele amakhulu ayisishiyagalombili! - eyaqala ukuxazululwa kuphela ngo-2005, lapho zonke izinkampani zanquma ukubeka imephu ukuthi yiziphi izinhlamvu ezisetshenzisiwe futhi zizame ukusungula izinga phakathi kwazo.
Ezinkulungwaneni ezimbili neshumi nambili, omunye wabaqhudelana be-NTT DoCoMo, ngosizo lukaKurita, ekugcineni uhlele kabusha izinhlamvu zangempela.
Kulungile, kodwa ziphume kanjani "Izinhlamvu Ze-Emojis" ezweni lase-Japan futhi zathatha umhlaba?
Uma uke wacabanga nge-Apple, uqinisile!
Ezinkulungwaneni ezimbili nesikhombisa, I-Apple ikhiphe i-iPhone yokuqala futhi, ngokucabangela ukuthandwa kwayo emakethe yaseJapane, kufakwe ama-Emoji, kuyilapho lezi kwakuyizinkambiso ezinamandla kakhulu ezweni.
Ngaphezulu entshonalanga, ama-Emojis ayesafihliwe ku-iPhone futhi atholakala kuphela lapho abasebenzisi beshintsha ulimi lwedivayisi lube lwesiJapane.
Ngokunikezwa isifiso somphakathi owawufuna ukuxhumana usebenzisa izimpawu nobuso obunobungane, U-Apple ukhiphe ama-Emojis kulimi ngalunye ngo-2011, ngokwethulwa kwe-iOS.
Futhi lokho kwaba ukuqala komkhuhlane njengoba sikwazi namuhla: I-Google ne-Windows benze isiqiniseko sokuthi ama-Emojis abo agqugquzelwa ukwakhiwa komncintiswano.
Ukuze kugwenywe isiphithiphithi esasiyisiqalo se-Emojis ezweni lase-Japan, i-Unicode Consortium yathatha igxathu lokulinganisa ikhodi yomlingiswa ukuze abasebenzisi bezinhlelo zokusebenza ezihlukene bakwazi ukusebenzisa i-Emojis ngaphandle kokungaboni ngaso linye.
Namuhla, i izinhlamvu ze-emoji Ziyingxenye yesiko, futhi zisetshenziswa kusukela ekuxhumaneni kwansuku zonke kuye ekuxoxeni izindaba, njengasendabeni yencwadi ethi Emoji Dick, eguqule indaba evamile ka-Moby Dick kusetshenziswa ama-Emojis kuphela.
Izinhlamvu zama-Emojis kwezokuthengisa
Ngokuthandwa okukhulu kwe izinhlamvu ze-emoji kanye nendlela abethulwa ngayo ngesiko leplanethi, abathengisi abahle babone amathuba amaningi lolu limi olungawasebenzisa ekuxhumaneni namakhasimende abo esevisi.
Futhi akukhona nje ngezinkulungwane zeminyaka! Njengoba sibonile izibalo zesihloko sokugcina, i Amaphesenti angama-92 abasebenzisi be-inthanethi namuhla asebenzisa ama-Emojis.
Naphezu kokuba umkhuba oqinile ngempela, kuyadingeka ukuba uqaphele ekusetshenzisweni kwawo, ungenzi ihaba noma ubangele ukungezwani. Ngakho-ke, silethe okuthile Amathiphu Okusebenzisa I-Emojis Ekukhangiseni yenkampani yakho:
1. Yazi ama-Emojis
Lesi isinyathelo esibalulekile ngaphambi kokucabanga nganoma yikuphi ukuxhumana, njengoba sihlala futhi kuzo zonke izimo sikhuluma lapha kuwebhu yewebhu.
Ngaphambi kokuthi ucabangisise kahle ukuthi yini ongayisho nokuthi ukusho kanjani, yazi ukuthi umuntu wakho uyazibandakanya nakho. ukusetshenziswa kwe-Emojis. Ingabe izethameli zakho zikumaphesenti ayisishiyagalombili angakaqashi futhi azifani nabalingiswa?
Kulolu cwaningo nokuhlola ukusetshenziswa. Bona ukuthi yiluphi uhlobo lokuxhumana olusabela kakhulu kokuthunyelwe kwakho nokuthi kungena kanjani.
2. Yazi izincazelo
Elinye lamaphutha amakhulu lapho sebenzisa i-Emoji kwezokuthengisa kuwukuzisebenzisa ngaphandle kokwazi incazelo ngempela. Akuwona wonke umuntu ongamela lokho okucabangayo, ngakho-ke kubalulekile ukwazi kahle ukuthi ukhuluma ngani.
Ithiphu elihle ukusebenzisa i-Emojipedia ukuthola incazelo yawo wonke ama-Emojis, kanye nokucwaninga abalingiswa abakhethiwe ezinkundleni zokuxhumana ukubona ukuthi abantu bazisebenzisa kanjani futhi bakusiphi isimo.
3. Hlala ubukele izindaba
Kungenzeka ukuthi uye wakwazisa, kodwa izinhlamvu ze-emoji zivuselelwa njalo.
Umuntu okhuluma ngqo nomkhiqizo wakho angavela futhi abe indlela ebalulekile yokuxhumana nabalaleli bakho.
Futhi khumbula ukuthi umuntu wakho ubesebenzisa ini, yiziphi izinkambiso nokuthi yiziphi ezingasasetshenziswa, kodwa kubalulekile ukuthi ukuxhumana kwakho kufakwe olimini ofuna ukufinyelela kulo.
4. Sebenzisa ama-Emojis ukwenza umkhiqizo wakho ube ngumuntu
Njengoba sibonile lapho ezinsukwini zakuqala Ama-Emoji, ukudalwa kwawo bekuwukudlulisa imizwa ngqo obekungenzeki embhalweni nokwenza imilayezo ibanda futhi iqhelelene.
Ngakho-ke, kuyindlela enhle yokusebenzisa izinhlamvu ze-emoji en ukusebenzisana kwesikhathi sangempela futhi uhlanganyele nezithameli zakho, ikakhulukazi uma lokho kuxhumana kungahlelekile futhi kujabulisa, njengalapho othile encoma inkampani yakho noma okuqukethwe ibhulogi yakho noma inethiwekhi yokuxhumana nabantu.
5. Gwema imiyalezo ebhalwe phansi noma uyichaze kahle
Akuwona wonke umuntu ongakwazi ukuqonda kalula ukuthi izimpawu zisho ukuthini, ngakho-ke qaphela imilayezo efakwe ikhodi ngokuphelele ngama-Emoji. Umlayezo wakho ungase ungangeni futhi ungase uphuthelwe ukwakha ukuxhumana nezithameli zakho.
6. Yazi ukuthi kufanele usebenzise nini
I-Emoji esetshenziswe esimweni esibucayi kakhulu, njengalapho uphendula isikhalazo esivela kuklayenti lakho ku-Twitter noma esitatimendeni esibucayi, ingaba isibhamu onyaweni.
Qiniseka ukuthi i-Emoji ngeke idide noma imcasule umuntu ofunda umlayezo wakho, futhi uyisebenzise ngokucophelela, ikakhulukazi uma kuziwa enkonzweni yamakhasimende.
7. Sebenzisa Izinhlamvu Ze-Emoji ezihambisana nomlayezo wakho
Ungalokothi usebenzise izinhlamvu ze-emoji ukusebenzisa nje. Qiniseka ukuthi ukusetshenziswa kuzokwengeza emyalezweni wakho noma kuhlobane nalokho ofuna ukukusho.
Izincazelo ezisetshenziswa kakhulu i-Emojis kwi-Intanethi
Lobu buso obujabule obubonisa amazinyo abo yi-Emoji ekahle yokuchaza injabulo noma injabulo yomlayezo owamukelwe. Lesi sithonjana esidumile besilokhu sinathi kusukela ekuqaleni kwezinhlelo zokusebenza ze-imeyili ezisheshayo nezinkundla.
I-Emoji Ehlekayo Ekhalayo isetshenziselwa ukuzwakalisa ukuthi uhleke kakhulu kangangokuthi amehlo akho agcwala izinyembezi. Kusetshenziswa ukuxhumana lapho umuntu ethola into ehlekisayo ngempela. Le Emoji yaziwa kakhulu kangangoba bekungeyokuqala ukwengezwa kusichazamazwi sesiNgisi i-Oxford kwathi ngo-XNUMX yathathwa “njengeZwi Lonyaka”.
Ubuso obuzindlayo yi-Emoji esetshenziselwa ukusho ukuthi uzindla ngokuthile, noma ukuveza ukuthi udidekile. Ingasetshenziswa futhi uma ufuna ukungabaza iqiniso lento eshiwo. Njengelukuluku singasho ukuthi ingesinye sezithonjana ezimbalwa ezikhombisa isandla.
Ehleka ejuluke ebanda
Le Emoji ivame ukusetshenziselwa ukuveza ukukhululeka ekuphumeni esimweni esinzima. Kungasetshenziswa futhi ukusho ukuthi ube namahloni kancane ngesimo esithile.
Ubuso obumamatheka ngamehlo amomothekayo
Lobu buso obumamathekayo obunezihlathi ezikhazimulayo bungamelela ukumamatheka okunamahloni. Lingamelela futhi ukwaneliseka, ukuthula kwengqondo nokubonga. Ukwehluka kwayo kwemzwelo ngu-^^.
Ubuso obumamatheka nge-halo
Le Emoji isetshenziswa ngesikhathi lapho umuntu efuna ukuveza ubumsulwa bakhe. Libuye lisetshenziswe lapho othile enza izenzo ezinhle, emnandi kakhulu, engenacala noma eziphatha ngendlela eyisibonelo.
Kodwa ubuso bengelosi bungasetshenziswa futhi ngokuxakayo, ezenzweni noma ekuziphatheni okungekuhle kakhulu.
Ungangithathi serious! Le Emoji isetshenziselwa ukukhombisa umlayezo oyindida, oyindida noma ojabulisayo. Ngaphezu kwalokho, kungase kubonise ukuthi unamahloni noma awuthandi ihlaya.
Lobu buso obunonya obucwayizayo bungabonakalisa isenzo sokusebenzisana noma imvume, futhi busetshenziswa njengophawu lokudlala ngothando. Futhi, ingasetshenziswa ukuveza i-"ok" enikezwe umuntu, ihlaya noma indida kuye ngecala.
Lobuso obukhululekile busho ukuthi konke kuhambe kahle! Isetshenziswa lapho umuntu ejabule ukuthi into engathandeki isiphelile. Kungamela futhi ukuthi umuntu ukhululekile, akanakho ukukhathazeka.
Ubuso obumamathekayo obunenhliziyo emehlweni
Lobu buso obujabulile obunamehlo amise okwenhliziyo bukhombisa ukuthi umuntu uyahlanya othandweni futhi kungaba okomuntu, indawo noma into. Kuyi-Emoji enhle ukuthumela ku-crush yakho.
Izwakalisa uthando, ukwazisa, nokubonga, futhi ivame ukusetshenziswa emilayezweni yothando.
Lena enye ye-Emojis eqabulayo esetshenziswa kakhulu, ebonisa uthando, ukubonga noma isimangalo esithile sothando. Ingasetshenziswa futhi ekugcineni komusho obhuqayo noma njengokusabela esigijimini esingenanhlonipho.
Le Emoji idume kakhulu futhi ivamise ukusetshenziselwa ukuthumela ukwanga okunothando komunye umuntu. Kunama-Emoji ahlukene okuqabula, kodwa lena ingenye esetshenziswa kakhulu.
Le Emoji ingasetshenziswa ngendlela ethile yokuthi "Ngiyadlala", ukuze athambise amazwana ahlekisayo noma enze kucace ukuthi okuthile kushiwo okungafanele kuthathwe ngokungathi sína.
Ama-kegs amakhulu, ukumamatheka okungajabulisi, namazinyo avele ngaphandle, le Emoji iyisimo esingokwengqondo somuntu ohlakaniphile. Isetshenziswa ngendlela ehlekisayo noma ebhuqayo, ukuveza ukuthi uhlakaniphe kangakanani.
Umfana onezibuko zelanga
Uma ufuna ukufundisa ubuhlakani, lena i-Emoji ekahle. Ingase futhi isetshenziselwe ukukhombisa indida nokunganaki kokuthile okukhulunyiwe. Ngaphezu kwalokho, limelela ilanga, amaholide kanye nehlobo ogwini.
Lokho kumomotheka okuyingxenye kumelela ukubhuqa, ukubanda noma kusetshenziselwa ukusho ukuthi kukhona owenza okuthile. Ingase futhi isetshenziselwe ukudlala ngothando noma ukwenza amazwibela ocansi.
Lokhu kubukeka okucasulayo kuveza ukunganeliseki. Kubonisa ukuthi umuntu akajatshuliswa okuthile, ukuthi akanasithakazelo noma akakwamukeli.
Le Emoji isetshenziselwa ukusho ukuthi umuntu udabuke ngempela futhi ukhungathekile. Kumelela ukudabuka, ukuzisola nokuzisola.
Isetshenziswa lapho othile ezizwa enesifiso, engavikelekile, futhi engakhululekile. Kubonisa ukuthi umuntu ukhathazekile ngesimo esiyinkimbinkimbi noma isenzakalo esibalulekile.
Le Emoji Yeshiya Elikhalayo Nokukhala ibonisa isimo sobuhlungu bento ethile, yokuhlupheka. Ukuthi kusebuhlungu ukukhumbula okuthile. Ngokuvamile lisetshenziselwa ukuveza ukungakhululeki noma ukudumala ngokuthile.
Kule Emoji, izinyembezi ziphuma emehlweni njengempophoma. Imele ukudabuka okukhulu, ubuhlungu noma ukunqotshwa. Phakathi kwama-Emoji adlulisa umuzwa wokudabuka noma wokuphoxeka, lena enye evame kakhulu.
Le Emoji isetshenziswa uma ucasukile, uthukuthele, noma uthukuthele kakhulu ngokuthile. I-Emoji Yobuso Obuthukuthele iveza isimo esibi noma ukungakhululeki esimweni.
Isetshenziswa lapho umuntu ethukile, esesimweni esingakhululekile, noma enze iphutha. Veza ukuphoxeka, ukuthi udlula kokuthile okubangela amahloni kakhulu, noma ukusabela ekuncomeni noma umlayezo othophayo.
Lobu buso obethukile bukhuthazwe umdwebo othi The Scream womculi waseNorway u-Edvard Munch. Kusho ukuthi umuntu uyesaba, uvalo ngento ethile.
Lobu buso bumele umuntu owesabayo nodangele. Ubonakala ethuthumela ngokujulile futhi ethuswa isenzakalo esibi noma okuhlangenwe nakho okukhulu.
Imelela ukugandeleleka noma ukukhathazeka, lapho izinto zenzeka ngendlela ehlukile kunokulindelekile. Ingasetshenziswa futhi uma ukhathele noma unokuningi okwenzayo. Lokhu kumelela injabulo ngokukhululeka.
Ubuso ngaphandle komlomo
Le Emoji isetshenziselwa ukumelela ukuthi umuntu akakwazi ukukhuluma. Ukuthi othile akafuni noma akakwazi ukusho lutho ngesihloko esithile. Isetshenziswa ezingxoxweni ezinzima impela, eziphoxayo noma ezimbi kakhulu.
Ubuso obungathathi hlangothi
Le Emoji ibonisa ubuso obungabonisi nokubukeka okumaphakathi. Kusho ukuthi umuntu akanandaba nesimo. Ngokuvamile lisetshenziswa lapho okuthile kungenasithakazelo futhi kungekho nkulumo efanelekile yokudlulisa lowo muzwa.
Le Emoji imelela ukuthi okuthile bekuyihlazo ngempela. Kuwukubonakaliswa kovalo noma ukuphoxeka. Kungasetshenziswa futhi njengokumomotheka okunecala kancane, okuvela kothile owenze into ewubuwula futhi ozama ukulungisa isimo esishubile ngokwenza ubuso.
Le Emoji isetshenziselwa ukumelela umuzwa wokudelela, indelelo noma intukuthelo ngothile noma into eshiwo ngaphambilini, ngisho nesithukuthezi ngomuntu noma isihloko. Kungasetshenziswa futhi ukukhomba ukuthi umyalezo othile wawunokubhuqa.
Hewu Nkosi yami! Lobu buso obumangele ngokungemukeleki busetshenziswa lapho kwenzeka okuthile okumangazayo. Kungaba ukusabela ekuziphatheni okubi noma umlayezo odelelayo, noma lapho kungenezelwa lutho kulokho osekushiwo.
Emakhomikhi noma emakhathuni, i-zZz ngaphezu kwekhanda isho ukuthi umlingisi ulele. Le Emoji isetshenziswa lapho umuntu ekhathele kakhulu, efuna ukulala noma ekhathele indaba.
Le Emoji ibonisa umuntu oshonile ngenxa yokukhathala. Leli bhamuza eliphuma ekhaleni liwuphawu oluvamile lwe-manga, olumelela ukuthi umlingisi ulele.
Isetshenziswa njengesisho sokuthi ingxoxo ayinalutho futhi ayinazo ubuthongo.
Le Emoji isho ukuthi lo muntu wayecasukile ngale nto eshiwo waze wacishe waphalaza. Isetshenziswa njengendlela yokungavumeli okuthile.
Ubuso obumamathekile obumamatheka
Lokhu kumomotheka okunonya okunezimpondo zikadeveli ezincane kuhloselwe ukukhombisa ukuthi lo muntu ufuna ukwenza inkinga. Ingasetshenziswa futhi ngonya noma ngokocansi.
Haleluya! Lezi zandla ezeluliwe zibheke phezulu zisetshenziselwa ukubungaza okuthile noma ukuveza ukuthi umuntu ujabule ngoba into ebilindelwe igcine yenzeka. Iphinde ikhombise ukuthi ujabule futhi uyasithokozela lesi sikhathi.
Hawu, kuhle ngempela! Le Emoji ibonisa izandla ezi-2 ezishaya izandla futhi ngokuyinhloko isetshenziselwa ukuveza imvume nokubonga. Ingasetshenziswa futhi ngokubhuqa, uma kukhona okungakufanelanga ukushayelwa ihlombe!
Lesi sibhakela sisetshenziselwa ukukhuthaza umuntu noma ukusho ukuthi weneliswa ngomunye osohlangothini lwakhe. I-Fist Emoji ingenye edume kakhulu, esetshenziswa ngendlela efanayo ncamashi nesenzo sobungani esidumile empilweni yangempela, okungukuthi ukubingelela umngane esikhundleni sokuthi "sawubona". Ngakolunye uhlangothi, kungabuye kuhunyushwe njengosongo lokushaywa.
Ngikubhekile! Lawa mehlo amabili asho ukuthi kukhona okubonwayo noma okuqinisekisiwe.
Isandla ebusweni (Facepalm)
Le Emoji ichaza ukuthinta okwenziwe kwaduma ngochungechunge lwe-Star Trek. Kusho ukuthi "akukwazi ukuba yiqiniso!"
Lisetshenziswa uma uzwa noma ubona umuntu enza into ewubulima, kodwa lingasetshenziswa uma uzizwa "unamahloni ngabanye".
Isetshenziselwa ukuveza imizwa yokuthi "Angazi ukuthi ngingakusiza kanjani" noma "Yenza ini, akunjalo?". Le Emoji Ye-Shrug ibonisa ukungazi, ukudideka, noma ukungabi nentshisekelo kokuthile. Iphuma kusithombe-mzwelo ¯ _ (ツ) _ / ¯.
Ama-Emojis asephenduke ama-memes noma anencazelo ephindwe kabili
I-Peach Emojis isetshenziswe kakhulu ukuze imele izimbongolo, ngenxa yokufana okubonwa ngabasebenzisi abaningi. Lokhu kuholele ekutheni aziwe ngele-"butt emoticon".
Ubuso benyanga obugcwele
Inyanga egcwele i-euphemism yasekuqaleni esetshenziselwa isinqe. Eqinisweni, e-US, inyanga ibisetshenziswa ukuchaza izimbongolo kusukela ngo-1743, kudala ngaphambi kokuba kusungulwe i-Peach Emoji.
I-emoji yenyanga emnyama
I-Emoji Yenyanga Emnyama ivamise ukusetshenziselwa ukudwebela incazelo yocansi emshweni. Ukudlala ngothando kuvame ukusetshenziselwa ukwenza ihlaya locansi.
Le Emoji ye-Smiling Poop isetshenziswa kuzimo eziningi. Ukusetshenziswa okuvamile ukusho ukuthi okuqukethwe kubi, kodwa kungase futhi kusetshenziselwe ukuveza ulaka lokwenziwa, ngenxa yobuso obujabule nobumamathekayo bale nqwaba yendle.
I-Emoji yesitshalo seqanda
I-Emoji yesitshalo seqanda isetshenziswe nemvamisa ethile emilayezweni eku-inthanethi ukuze imele izitho zangasese zabesilisa noma njengezinkulumo zocansi.
Ubuso obunokubukeka kokunqoba
Abantu abaningi babheka le Emoji njengokumelela umuntu ohonqayo ngokucasuka. Kodwa empeleni, la mafu amhlophe aphuma ekhaleni afuna ukumelela ukudelelwa, uphawu lokuziphakamisa. Kubonisa umuntu ozidlayo, onqoba omunye.
Umuntu onezandla ezihlangene
Le Emoji isetshenziswa kaningi ukuze ubonise othile sengathi uyathandaza, ecela okuthile kuNkulunkulu. Kodwa-ke, lokho ekumelelayo ngempela "isihlanu esiphezulu".
Umuntu wesiteshi solwazi
Ngingaya kanjani? Le Emoji ikhombisa owesifazane okufanele aqondise umsebenzisi futhi aphendule imibuzo yakhe. Nokho, ngokuvamile kuye kwaba uhlobo lokubhuqa noma isibindi.
Okthoba 26, 2020
I-Emojis ye-Facebook com
Ungazi kanjani ukuthi Isitolo Se-inthanethi Sithembekile?
Khetha Zonke Izithombe kokuthi Izithombe ze-Google ukuze Usule kanye Namaqhinga Angeziwe
Ungalalela kanjani i-Yandex.Music ku-TV
Iyiphi ifoni engcono kakhulu ongayithenga? Spoiler: ayikho indlela yokuqagela
Ishicilelwe nge WordPress
I-Creative Stop Creative Tutorials
Imisho Engcono Kakhulu